Wax taaj oo caaga ah
Dongguan Enuo caaryada Co., Ltd. waa hoosaad ka tirsan Kooxda Hong Kong BHD, naqshadaynta caagga caagga ah iyo wax -soo -saarku waa meheradooda ugu muhiimsan. Intaas waxaa sii dheer, qaybaha birta ee mashiinnada CNC, alaabada tusaalaha ah R&D, qalabka kormeerka/Q & R & D, badeecooyinka caagga ah ee wax -ka -beddelka, buufinta iyo isu -imaatinka ayaa sidoo kale ku hawlan.
Fikradda gaarka ah ee nolosha caaryada caagga ah
Nolosha caag caag ah waxaa loola jeedaa cimri dhererka caaryada oo caadiyan soo saari karta alaabo tayo leh. Waxaan guud ahaan tixraacnaa tirada wareegyada shaqada ee ay dhammeeyeen caaryada ama tirada qaybaha la soo saaray. Inta lagu jiro isticmaalka caadiga ah ee caaryada, qaybaheeda ayaa ku guul darreysanaya inay xirtaan ama dhaawacaan hal ...
warshadaynta caaryada saxda ah ee dalkaygu waxay leedahay mustaqbal ifaya, waxayna la jaanqaadaysaa suuqa caalamiga ah
Horumarinta dhaqaalaha, warshadaha caaryada ayaa aad iyo aad u horumarsan, iyo shuruudaha caaryada warshado badan ayaa bilaabaya inay isbedelaan. Rajada qaab -dhismeedka saxda ah waa mid ballaaran, baahida loo qabo qaab -dhismeedyada saxda ahna waa gabaabsi. Si kastaba ha ahaatee, saamiga sare, ...
Waa maxay sababta badeecada la duray ay leedahay xagal qabyo ah? Maxay cabirkiisu ku xiran tahay?
1. Waa maxay sababta alaabta la isku duro ee duritaanka u leedahay xagal qabyo ah? Guud ahaan, alaabta la isku duro ee duritaanka waa in lagu farsameeyaa qaabab u dhigma. Ka dib marka la duray badeecada la duray oo la daaweeyo, waxaa laga saaraa godka caaryada ama xudunta, oo sida caadiga ah loo yaqaan demolding. Sababtoo ah wax -u -dhimeynta yaraanshaha iyo ...
Dhibaatooyinka si sahal ah ayaa loogala kulmaa Geedi -socodka Caaryada Wax -Abuurka Caaga ah
Caaryooyinka wax -u -samaynta caaga ah waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo badan oo ah qaybo la duray, kuwaas oo leh faa'iidooyinka wax -ku -oolnimada sare, tayo wanaagsan, goyn yar, keydinta tamarta iyo alaabta ceeriin, iyo qiimo jaban. Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah processing adag ee caaryada wax taaj oo kale caag ah, dhibaatooyin badan ayaa noqon doona en ...
Habka hagaajinta tayada caaryada caaga ah
Warshadaha wax -soo -saarka caaga ayaa si xawli ah u kobcay sannadihii la soo dhaafay waxayna noqotay mid aad iyo aad u awood badan. Ka sokow soo bandhigida qalab horumarsan iyo tikniyoolajiyad, ka shaqeynta caaryada ayaa sidoo kale soo saartay koox R&D iyo shirkado naqshadeyn ah si ay si joogto ah u horumariyaan cilmi baarista iyo horumarka ...
Waxa fiiro gaar ah loo siinayo habaynta caaryada caagga ah
Waxaa ka mid ah geedi -socodyada wax -ka -beddelka kala duwan ee caaryada caagga ah, wax -ka -durinta cirbadaha ayaa ah midka ugu badan ee la isticmaalo. Aragtida ayaa tilmaamaysa in wax -ka -beddelidda duritaanku ay leedahay faa'iidooyinka wax -ku -oolnimada wax -ku -oolka ah, awoodda wax -ku -beddelidda alaabada leh qaab -dhismeedyo isku -dhafan hal mar, xaaladaha geedi socodka baaluqa, sare ...
Cilmi -baaris ku saabsan isbeddelka horumarka ee caaryada
Horumarka joogtada ah ee dhaqaalaha iyo tiknolojiyadda dalkayga, suuqa caaryada macdanta ee dalkaygu aad ayuu u firfircoonaa sannadihii u dambeeyay. Marka la barbardhigo badeecadaha shisheeye, caaryada dalkaygu waxay leeyihiin faa'iidooyinka kharashyada wax -soo -saarka oo hooseeya, taas oo aan kaliya ka dhigin wax -soo -saarka gudaha ...
Waa maxay shuruudaha aasaasiga ah ee naqshadaynta caaryada caagga ah iyo wax -soo -saarka
Soosaarka waxsoosaarka warshaduhu waa mid aan laga sooci karin caaryada. Sidaa darteed, si aan u soo saarno badeecooyin caag ah oo wanaagsan, waa inaan marka hore haysannaa caaryaal tayo sare leh. Marka laga eego dhinaca warshadaha wax -qabadka balaastigga, si loo hubiyo tayada caaryada iyo qiimaha ku habboon, fol ...
Caaggu wuxuu dardar geliyaa kacaanka cusub ee waxsoosaarka baabuurta
Sanadihii la soo dhaafay, codsiga balaastikada ee baabuurta ayaa sii waday inuu kordho. Waqtigan xaadirka ah, isticmaalka balaastikada baabuurta ee Jarmalka, Maraykanka, Japan iyo dalal kale ayaa gaaray 10%ilaa 15%, qaarkoodna xitaa waxay gaareen in ka badan 20%. Ka qiimeynta agabyada loo adeegsado casriga ...
Fashilka farsamo ee caaryada ee wax -ka -duridda duritaanka ayaa leh dhinacyada soo socda
1. Mashiinka caaggu ma furi karo/ma xiri karo caaryada Falanqaynta Sababta: albaabka badbaadada wax soo saarka ee mashiinka balaastigga si fiican looma xiro, aaladda badbaadada ammaankuna ma hesho signal. Tusaale ahaan, beddelka safarka kabaalka badbaadada ee mashiinka caagga ah ma helo signal, su ...
Faahfaahinta shuruudaha la xiriira wax ka samaynta caaga
1. Cufnaanta qaraabada/saamiga Cufnaanta qaraabada ah waxaa loola jeedaa mugga shirkadda walaxda kiimikada. Saamiga waxaa loola jeedaa saamiga cufnaanta qaraabada walaxda kiimikada iyo cufnaanta biyaha. 2. Kulaylka uumiga iyo isudheellitirka cadaadiska Kulaylka uumiga ayaa ah ...
Maxay yihiin arrimaha u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho soo saarista caaryada caagga ah?
Inta lagu jiro wax -soo -saarka, marka dhalaalashada caagga ah lagu durayo godka caaryada iyadoo heerkulkiisu sarreeyo iyo cadaadis sarreeya oo lagu dhajiyo cadaadis, marka heerkulku hoos u dhaco, dhalaaliddu way qaboojisaa oo waxay ku adkaataa qayb caag ah. Cabbirka qaybta caagga ah ayaa ka yar tan godka caaryada, kaas oo ...
Sida loo doorto caaryada caaryada ee warshadda caaryada
Caaryada waxaa loo yaqaan "hooyada warshadaha" ee warshadaha wax soo saarka bulshada warshadaha casriga ah. Caaryada duritaanka oo buuxisa heerarka naqshadeynta waxay soo saari kartaa badeecooyin loo baahan yahay nolosha iyo ka shaqaynta dufcadaha, waxayna sii garwaaqsan kartaa waxsoosaarka ballaaran iyo jaangooynta pro -caag ...
Waa maxay noocyada iyo qaababka caaryada caaga ah
Caaga caaga ah waa shay is haysta. Waxay leedahay qaab qasan waxayna aqbashaa xoogga bararka ee bannaan. Sidaa darteed, waxaa jira shuruudo sare oo loogu talagalay xoogga qaabdhismeedka, adkaynta, adkaysiga guud, qalafsan guud iyo saxnaanta mashiinka. Koritaanka caaryada caag ah waa heerka farsameynta farsamada ...
Sida loo hagaajiyo tayada caaryada
Habka aasaasiga ah ee lagu hagaajinayo tayada caaryada: naqshadaynta caaryada ayaa ah tallaabada ugu muhiimsan ee lagu hagaajinayo tayada caaryada. Qodobo badan ayaa u baahan in la tixgeliyo, oo ay ku jiraan xulashada alaabta caaryada, adeegsiga iyo badbaadada qaab dhismeedka caaryada, farsamaynta qaybaha caaryada iyo caaryada Ku habboonaanta dayactirka ...
Dabeecadda iyo adeegsiga caaryada duritaanka
Naqshadaynta caaryada duritaanka waa qayb aad muhiim ugu ah nolosha casriga ah. Nolosha dadka, waxaa jira codsiyo badan oo aalado ah, iyo mashiinno iyo qalab badan oo elektiroonig ah, kuwaas oo aan kala sooci karin naqshada caaryada duritaanka. Waxaa si hufan u sabab ah tan horumarinta suuqa ee caaryada duritaanka ...
Heerka jaangoynta iyo heerka dalabka ee wasakhaha ee waddankeyga wuxuu gaari karaa 50%
Ka dib markii muddo horumar deg -deg ah laga sameeyay warshadaha qaybaha caaryada ee dalkayga, qaybo ayaa si tartiib -tartiib ah ugu horumaray jihada dejinta, takhasuska iyo ganacsiga, qaarkoodna waxay gaareen heer sare waxayna sameeyeen horumar la taaban karo. Laga soo bilaabo barta guud ...
Taariikhda iyo jihada horumarka mustaqbalka ee warshadaha caaryada
Caaryadu waa qalabka habka aasaasiga ah ee waxsoosaarka warshadaha sida mashiinada, duulista, baabuurta, elektarooniga, isgaarsiinta, iyo qalabka guriga, waana alaab tiknoolajiyad sare leh. Waqtigan xaadirka ah, wadarta qiimaha wax -soo -saarka ee caaryada Shiinaha wuxuu noqday kan saddexaad ee adduunka, oo kaliya Japan ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya habaynta lathe caaryada iyo wax -soo -saarka caaryada?
Farqiga iyo xidhiidhka ka dhexeeya caaryada iyo lathe: 1. Caaryo (mú jù), caaryaal iyo qalabyo kala duwan oo loo isticmaalo wax soo saarka warshadaha si loo helo badeecadaha loo baahan yahay iyada oo la durayo duray, wax-yeelidda afuufidda, soo-saaridda, dhimista-shubista ama wax-ka-samaynta foorno, dhalaalid, shaabadaynta iyo habab kale. Marka la soo koobo, caaryadu waa ...
Fikradda iyo faa'iidooyinka iyo khasaaraha CNC
CNC waa aalad mashiin otomaatig ah oo lagu qalabeeyay nidaamka xakamaynta barnaamijka. Nidaamka kontaroolku wuxuu si macquul ah barnaamijka ugu socodsiin karaa koodhadhka xakamaynta ama tilmaamo kale oo astaan ​​u ah, oo uu dejin karo, si uu u sameeyo aaladda mashiinku inay dhaqaajiso oo ay socodsiiso qaybaha. Soo gaabinta CNC ee Af -Ingiriisiga waa soo gaabin ...
Sagaal isbeddel oo waaweyn oo ku saabsan horumarinta warshadaha caaryada baabuurta
Caaryadu waa qalabka habka aasaasiga ah ee warshadaha baabuurta. In ka badan 90% qaybaha iyo qaybaha waxsoosaarka baabuurta ayaa u baahan in lagu sameeyo caaryo. Sida laga soo xigtay Luo Baihui, oo ah khabiir caaryada, qiyaastii 1,500 caaryaal ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo baabuur caadi ah, kaas oo in ka badan 1,000 caaryo shaabadaysan ...
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ka -beddelidda isku -buuqa
Marka wax la isku riixo, laba badh oo caaryada u dhigma ayaa lagu rakibay saxaafad (badiyaa haanta), dhaqdhaqaaqooduna wuxuu ku kooban yahay dhidib ku toosan diyaaradda caaryada. Isku dar ah cusbi, buuxiye, agab xoojinaya, wakiilka dawaynta, iwm ayaa la cadaadiyey oo laga bogsaday gobolka ay ka buuxdo ...
Waxyaalaha saameeya nolosha wasakhaha baabuurta
Horumarka degdegga ah ee warshadaha baabuurta ee casriga ah ayaa dadka ka dhigay inay yeeshaan shuruudo ka sarreeya oo ka sarreeya dhammaan dhinacyada baabuurta. Isla mar ahaantaana, nolosha adeegga ee wasakhaha baabuurta ayaa had iyo jeer ahayd arrin muhiim u ah shirkadaha. Markaa sababahaasi waa qodobbada ...
Horudhaca heerka horumarka imika ee caaryada cirbadaha ee dalkayga
Horumarinta degdegga ah ee warshadaha sida baabuurta iyo qalabka guryaha, caaryooyinka duritaanka ayaa si degdeg ah u horumaray. Mawqifka warshadaha caaryada duritaanka ee waxsoosaarka warshadaha ee dalkaygu waa mid aad muhiim u ah. Horumarka degdega ah ee sanadihii la soo dhaafay ka dib, duritaanka ...
Tallaabooyinka aasaasiga ah ee samaynta caaryada
1. Soosaarka caaryada Masterka: Waxaa jira agabyo badan oo loogu talagalay caaryada sayidkiisa. Guud ahaan, maaddada caaryada sayidku waxay u baahan tahay inay si fudud u qaabaysnaato, u fudud tahay nasashada, oo leedahay astaamaha xasilloonida wanaagsan. Sida alwaax, nuurad, wax, iwm Waxaan badanaa isticmaalnaa alwaax. Sida laga soo xigtay dheelitirka alaabta ...
Waa imisa cabbirka suuqa ee warshadaha caaryada gudaha ee dalkayga hadda?
Caagadaha caaga ah ayaa lagu xisaabiyey saamiga ugu badan ee wadarta iibka caaryada ee dalkeyga, oo qiyaastii ah 45%; caaryada shaabadaysan ayaa lagu qiyaasay 37%; caaryada wax lagu shubay ayaa qiyaastii ahayd 9%; iyo noocyada kale ee caaryaduhu waxay ahaayeen ilaa 9%. Waxaa jira ilaa 30,000 warshado wax soo saarka caaryada ee ...
Sida soo saaraha caaryada dhoofinta ee Shiinaha, Marka la barbardhigo caaryada gudaha, dhoofinta qiimaha caaryada ayaa si cad u sarreysa sanadihii la soo dhaafay, farqiga waxaa sababay heerka diffriend. Jaaliyadda Maraykanka ee Warshadaha Caagga ah (SPIAN-102-78) ayaa caaryada u qaybisa shan qaybood. Shanta nooc ee caaryada ayaa ...
2K Caaryada-wax-ka-Beddelidda Caaryada Ka Hortagga CNC axdi qarameedka CNC Lahing Alaabooyinka Tilmaamaha Qaabkii Furashada Qaab sax ah Caaryada Multi-godadka Daboolida Baabuurka Qaab Weyn Xafiiska & Qalabka Guriga
Shirkadaha wax ku caaryada duritaanka caaga ee USA Shirkadaha wax taaj oo kale duritaanka caaga Badeecada Caaga ah ee Ameerika Caaryada Degdega ah ee Ameerika Qalabaynta Jarmalka Sameeyaha Sameeya In America Fan iyo Fan Shroud In America Qaybta Makiinadaha In America Qaybaha Birta Machining ee America Alaabta caaga ah ee Jarmalka Alaabta Caaga ah ee Maraykanka Wax taaj oo kale duritaanka caaga Caaga wax taaj oo kale ah ee Germany Caaryada Degdega ah ee Jarmalka Nooca Prototype ee America Caaryada Cirbadda ee Ameerika Duritaanka Caaga ee Jarmalka Caaryada duritaanka ee Jarmalka Alaabta Prototype ee Ameerika Alaabta Prototype ee Jarmalka Caaga caaga In America Die caaryada ee Germany Caaga wax taaj oo kale ah In America Die caaryada ee America Caaga caaga ee Germany Jigs ee Jarmalka Qalabaynta Ameerika Haamaha Cirka iyo Biyaha ee Ameerika Jigs In America Qaab sameeyaha ee Jarmalka Haamaha Cirka Iyo Biyaha Ee Jarmalka Qiyaasta Jarmalka Qaab -dhismeedka Predeformation ee Jarmalka Sameeyaha Caabuqa ee America Qiyaasta Ameerika Fan iyo Fan Shroud ee Jarmalka Qaab -dhismeedka Predeformation ee Ameerika Qaybta Radiator ee Maraykanka Qaybta Radiator ee Jarmalka Qaybaha Birta Machining ee Germany
Ereyadu waa inay daacad noqdaan, maadaama ballanku yahay deyn！
Qaybo ka mid ah Tuurista
| Haamaha Cirka & Haanta Biyaha | Fanaan/Xidh | Qaadashada Manifold | Daboolka Matoorka | Qorraxda Auto | Gawaarida Gawaarida | Gawaarida Gawaarida Gawaarida |